सावधान ! लकडाउन उल्लंघन गरे ६ महिना कैद हुनसक्छ – Samacharpati
लकडाउनको बेला के-के गर्न पाइन्छ ?
काठमाडौं । नेपाल सरकारले कोरोना भाइरस संक्रमणको महामारी रोक्ने प्रयासमा एक साताका लागि देशलाई ‘लकडाउन’ गरेको छ । साथै देशभरका नेपालीहरुलाई चैत ११ गते बिहान ६ बजेदेखि चैत १८ गते साँझ ६ बजेसम्म अत्यावश्यक कामबाहेक घरबाट बाहिर निस्कन रोक लगाइएको छ ।
लकडाउन कर्फ्यु जस्तो कडा हुँदैन । तर, लकडाउनको आदेश पालना नगर्नेहरुलाई ६ महिनासम्म कैद र ६ सय रूपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजायँ हुने कानुनी व्यवस्था छ ।
रामगोपालपुरमा सुशासन र आर्थिक पारदर्शिताको खाँचो
नेता शर्माको काँङ्ग्रेसमा सङ्कल्पित ५२ वर्ष पुस्तक परिचर्चा
मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार बिहीबारदेखि देशभर मौसम सुधार हुँदै जाने
पुस्तक आयातमा कर लगाउने निर्णयविरुद्ध त्रिचन्द्र कलेजका विद्यार्थी सडकमा उत्रिए